China Stainless Steel Cut Wire Shot orinasa sy mpanamboatra | Feng Erda
Ny tifitra vy notapahana vy dia ny mampiavaka antsika manokana. Vita amin'ny SUS200, 300, 400 andian-tariby vy tsy tapaka notapahina ho faritra. Ny fitifirana vy tsy misy vy dia ampiasaina amin'ny fampiharana manan-danja mihombo izay mety hanimba ny fandotoana ferrous amin'ny famafazana vy tsy misy fangarony, titanium, aluminium, na zavatra hafa tsy ferrous. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fitrandrahana ireny metaly ireny (vy vy, titanium, varahina na aliminioma) amin'ireo zavatra miasa izay iharan'ny fikorontanan'ny harafesin'ny adin-tsaina.
Toerana tsy misy harafesina mamirapiratra, endrika varingarina
Ny toe-karena ara-toekarena amin'ny fampiasana tariby vita amin'ny vy tsy voadidy amin'ny paompy fanadiovana sy fipoahana dia mora atao ihany. Ny tapaka tariby dia tsy vaky na simba mandritra ny fampiasana azy satria sombina mafy io. Vokatr'izany dia mahazo ireto tombony ireto ianao:
Fampiharana: misoroka ny fandotoana ferrous rehefa manapoaka na mamono vy tsy manara-penitra, titanium, aluminium, na zavatra asa tsy ferrous hafa.
Fepetahana: Hita amin'ny endrika miorina miaraka amina fanamarinana hihaona amin'ny MILS 13165C, SAE J441, ary ny famaritana aerospace AMS 2431/4. Stainless Steel Cut Wire Shot dia manana hamafin'ny Rockwell C amin'ny 50 - 58 HRC
Fampiharana: Ho an'ny fanomanana aliminioma amin'ny fanesorana loko ary amin'ny fanariana maty aluminium ho an'ny fandosirana sy famaranana.
Karazan-javatra: misoroka ny fandotoana ferrous - saingy malefaka kokoa (amin'ny HRC 30 - 35) ary lafo kokoa noho ny 300 Series Stainless.
Previous: Tifitra vy boribory karbaona ambany
Manaraka: Ferro Molybdenum